TWITTER ပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများကထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို - တွစ်တာ - 2019
သငျသညျသှေးဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးကွန်ပျူတာနှင့်အတူတစ်ဦး disc ကိုမှမီးမရှို့ဖို့လိုအပ်လာလျှင်သင်၏ကွန်ပျူတာအထူးဆော့ဗ်ဝဲကို install ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ DVDStyler သုံးပြီး optical drive မှာရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။
DVDStyler - ဖန်တီးစံချိန် DVD-ရုပ်ရှင်ရည်ရွယ်တဲ့အထူးပြုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ဟာ DVD-ROM ကိုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လိုအပ်သောစေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်လိုအပ်သော tools များတပ်ဆင်ထားသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ ပို. ပင်သာယာဖြစ်ပါသည် - ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
DVDStyler အစီအစဉ်ကို Download လုပ်ပါ
ရုပ်ရှင် disc ကိုမှမီးမရှို့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျစတင်ရန်မီ, သငျသညျရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ drive ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်တစ်ဦးကို DVD-R ကို (rewritable မဟုတ်), ဒါမှမဟုတ် DVD-RW (rewritable) တစ်ခုခုကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
1. သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် program ကို Install, drive ကိုစ disc ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် DVDStyler ကို run ။
2. သင်ပထမဦးဆုံးစတင်ပါလာတဲ့အခါသင် optical drive ကို၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့် DVD ကိုအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။ သငျသညျသေချာမသိကြအခြား parameters တွေကိုလျှင်, default အနေနဲ့အကြံပြုကစွန့်ခွာ။
3. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအောက်ပါချက်ချင်းသင်သင့်လျော်သော template ကို select လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှိရာ disc ကို၏ဖန်တီးမှုမှဝင်နှင့် header ကို specify ။
4. မျက်နှာပြင်သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်ဒီဗီဒီ menu ကို customize နှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူအလုပ်ကိုယ်တိုင်ကတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာလျှောက်လွှာဝင်းဒိုးကိုသူ့ဟာသူ, ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင် nakopitl အပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားမည်ကိုပြတင်းပေါက်ရုပ်ရှင်မှထည့်သွင်းဖို့ကအစီအစဉ်ကိုပြတင်းပေါက်၌ရှိသကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောပြီးဆွဲဖြစ်, နှင့်အထက်ဒေသမှာရှိတဲ့ button ကို click နှိပ်နိုင်ပါတယ် "ဖိုင်ကို Add"။ ထို့ကြောင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များ၏လိုအပ်သောအရေအတွက်ကိုဖြည့်စွက်။
5. လိုချင်သောဗီဒီယိုမှန်ကန်သောနိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ပြသပါလိမ့်မည်သည့်အခါ, သငျသညျအနည်းငယ် disc ကို menu ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အလွန်ပထမဦးဆုံးဆလိုက်မှဖွင့်, ရုပ်ရှင်၏ခေါင်းစဉ်ကို click လုပ်ပါ, သင်အမည်, အရောင်, စာလုံး, အရွယ်အစား, စတာတွေပြောင်းလဲနိုင်သည်
6. သငျသညျကဏ္ဍများကိုတစ်ဦး preview ကိုပြသသောဒုတိယဆလိုက်မှသွားလျှင်, သင်သည်သူတို့၏အမိန့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီး,, လိုအပ်ပါကအပိုပြတင်းပေါက် preview ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
7. ပြတင်းပေါက်၏လက်ဝဲ pane ထဲကအတွက် tab ကိုဖွင့်ပါ "ခလုတ်"။ ဒီနေရာတွင် disc ကို menu ပေါ်တွင်ပြသထားသောခလုတ်များ၏အမည်နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ နယူးခလုတ်ဟာ Workspace အတွက်ဆွဲအားဖြင့်လျှောက်ထားရသည်။ , မလိုချင်တဲ့ button ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရွေးဖို့ "ကိုဖျက်".
8. သင်သည်သင်၏ DVD-ROM ကို၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူပြီးဆုံးနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျမီးလောင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်၏ခလုတ်ကို၏အထက်လက်ဝဲဧရိယာထဲမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ "File" နှင့်ကိုသွား "DVD ကို Burn".
9. သစ်ကိုပြတင်းပေါက်၌, သငျသညျအပိုဒ်မှတ်သားဘူးသောသေချာအောင် "Burn"ထိုအရုံ DVD-disk ကို (သင်အများအပြားရှိသည်ဆိုပါက) ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောတပ်မက်လိုချင်သောအ drive ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ် "Start".
DVD-ROM ကိုအရာများ၏ကြာချိန်မှတ်တမ်းတင်မြန်နှုန်းအဖြစ် DVD-ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ မီးလောင်ပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုခဏအနေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော drive ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ် DVD-player ကိုအပေါ်ပြန်ဖွင့်ဘို့သုံးနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အောင်မြင်သောပြီးစီးအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: CD များမီးရှို့ Software များ
DVD-ROM Creating - အတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်။ DVDStyler အသုံးပြုခြင်း, သင်ရုံအပြည့်အဝ DVD-တိပ်မောင်းများနှင့်ဖန်တီးရန်သင့်ဗီဒီယိုများရှို့လို့မရပါဘူး။
ဗီဒီယို Watch: What is Twitter and How does it work in Hindi 2017. Twitter Sign Up (အောက်တိုဘာလ 2019).